Fikarohana momba ny firaisana Zava-nitranga vaovao momba ny alahelo ankehitriny momba ny alahelo: ny tantaram-piainan'ny famantaran-jaza sy mpamorona ny tantaran-dranomasina, John Harrison | Olombelona momba ny moto sy ida, Chuck McMurray - fikarohana Reincarnation
Fomba fiaina: Fahatsiarovana ireo Fiainana taloha taloha nankamin'ny fotoam-piainana taloha
Notadiavin'ny: Chuck McMurray
Lahatsoratra nosoratan'i: Chuck McMurray, Natontan'i Walter Semkiw, MD
Nandritra ny androm-piainana taloha, I Chuck McMurray, nino fa aho John Harrison, 18 taonath taonjato maro, mpamorona famantaran-tena anglisy ary mpamorona ny tantaran-dranomasina, izay fitaovana voafaritra tsara izay nampiasaina tamin'ny lalan'ny sambo ho an'ny tanjon-tsambo. Harrison dia niaina tamin'ny 1693 ka hatramin'ny 1776.
Mamela ahy hitantara aminao ny tantarako izay natomboka tamin'ny a ny famerenana ny fiainana taloha nitarika tamin'ny 2016, na dia tsy ho naka ny fiainako taloha aza i Harrison hatramin'ny 2018.
Tamin'ny 16 Oktobra 2019, herintaona mahery taorian'ny nanaovako ny hypotesisma fa izaho John Harrison, dia nanao fivoriana niaraka tamin'ny trance medium aho Kevin Ryerson, izay efa niasa betsaka tamin'ny Walter Semkiw, MD. Amin'ity fotoam-pianarana ity dia ny fiainako taloha raha i Harrison no nohamafisina. Andao isika manomboka eo am-piandohana.
Ny Fivarotan'i Chuck McMurrays taloha
Tamin'ny volana septambra 2016, dia nanao fotoana nifanarahana aho Susan Wisehart, MS, LMFT, izay mpitsabo aretin-tsaina manana fahazoan-dàlana ary mpitsabo mpanampy amin'ny fiainana taloha mba hanana ny famerenako voalohany. Ny anton'ny fahalianako amin'ny fikatsahana an'io dia ny fikarohana nataoko momba ny lohahevitra momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao sy any ankoatra.
Nahita ny anaran'i Susan aho tamin'ny fikarohana fikarohana momba ny réperistista taloha taloha tao amin'ny faritr'i Chicago, izay misy ahy. Niara-nianatra tamin'i Yale, Brian Weiss, MD, ilay mpitsabo aretin-tsaina, ary izy no manana valiny mahafinaritra an'ireo mpanjifa niara-niasa taminy.
Ka ny asabotsy 26 septambra 2016 dia nanao finam-po tamin'ny finoana aho ary nihaona tamin'i Susan. Faly aho fa natahotra ihany koa, tsy fantatro izay hitranga. Toy ny traikefa nahafinaritra no nitondrako azy.
Tamin'ny fanombohan'ny fanendrena ahy dia nisy ny fampahafantarana izay nanampy ahy hahatakatra izay antenaiko. Susan dia matihanina, nanampy ary nanao ny fizotrany ho toy ny zavatra voajanahary tokony hatao.
Amin'ny ankapobeny, tena mahafinaritra ny zavatra niainana, na dia nisy fihetseham-po mahery vaika aza nandritra ny fotoam-pivoriana. Raha ny tena marina dia tsy nino ny hoe tena latsa-dranomaso aho nandritra ilay zavatra iray manontolo.
Nandritra ny fotoam-pamaranana dia niaina fahatsiarovana mazava sy mazava tsara teo aloha aho. Novakiako fa betsaka ny olona manana an'io traikefa io mandritra ny régionitaire hypnotic, nefa hafa be izany rehefa mitranga aminao izany.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha tany Angletera
Toy ny mahazatra amin'ny fizotry ny régéris, dia nangataka ahy mba hiala sasatra tanteraka i Susan rehefa nitarika ahy ho amin'ny fisaintsainana na ny trance. Tena mora izany.
Tamin'ny fotoam-pivoriana ity dia nisokatra ny fahatsiarovana ny fiainam-piainana taloha. Hitako fa nita tetezana iray aho. Avy hatrany dia hitako fa teo akaikin'ny trano lehibe toa ny trano aho, amin'ny fananan'ny tany iray. Nampahatsiahy ahy ny trano iray taloha izany. Voaro matevina mafy ilay faritany manontolo. Ny varavarankely dia manana varavarankely maro sy lavarangana lehibe izay mihazakazaka ny halavan'ny trano. Misy lalambe miendrika U izay mitondra mpitsidika tonga any an-trano.
Rehefa nanontany i Susan rehefa nieritreritra aho fa avy any an-tsaina io fahatsiarovana io, dia nolazaiko fa toa tamin'ny 1600 tany ho any, angamba tany am-piandohan'ny 1700 tany ho any. Miorina amin'ny trano sy ny fomba fitafy ny olona, ​​dia nampahatsiahy ahy ny sarimihetsika izay hitako tamin'ny firenena anglisy.
Io fahatsiarovana io dia reko mazava tsara ny feon'ny kitron-tsoavaly sy ny kodiarana amin'ny kalesy mandeha amina lalambe na vato vita amin'ny biriky. Nanontany ahy i Susan hoe aiza aho no mino ary niteny tamim-pahatokisana hoe, "Angletera." Dia nangataka ahy ho voafaritra kokoa izy. Hoy aho hoe "North na West Yorkshire." Azafady fantaro fa na dia mba nitodika tany amin'ny sari-tanin'i Angletera indroa teo amin'ny fiainako aza aho, tsy nisy na inona na inona amin'ny fiainana anglisy nahaliana ahy.
Fiainana taloha lasa fanamiana miaramila anglisy
Nanasa ahy i Susan avy eo hamantatra izay toetran'ny vatako izay azoko tadidiko. Nilaza aho fa mitafy akanjo toy ny akanjo anglisy anglisy aho, tamin'ny vanim-potoan'ny Revolisiona Amerikanina. Fa ny zavatra hafahafa dia ny hoe tsy nanana fitaovam-piadiana aho-tsy basy na sabatra. Nohazavaiko fa angamba zazalahy nilalao miaramila tany an-tsaha aho.
Tao anatin'ity sehatra ity, niaraka tamin'ny sakaizako lahy iray aho. Nitsangana teo akaikin'ny vatan'ny rano izahay, toy ny dobo na renirano iray nita ny tetezana iray. Amin'io fahatsiarovana manokana io dia toa tena mahafaly anay ihany koa izahay, vazivazy sy fihomehezana, rehefa hitanay ny fomba niakanjo ny vehivavy rehefa nipoitra tamin'ny kalesin-tsoavaly niaraka tamin'ny lehilahy niaraka taminy.
Raha nandroso tamin'ny famerenan'ny fiainana taloha dia nanontany ahy ny zavatra manaraka tadidiko i Susan. Tadidiko fa zazalahy narary na naratra izay nandany fotoana tany amin'ny hopitaly aho. Tadidiko ny akanjo nanafiako. Milamina ny akanjo ary toy ny akanjo vita amin'ny landihazo. Tadidiko ny fiarahako tamin'ny ankizy hafa, ary koa ireo mpitsabo mpanampy sy mpikarakara.
Fanamarihana: Taty aoriana dia fantatro fa tamin'ny mbola kely i John Harrison dia narary voan'ny vatan-jaza ka naiditra hopitaly. Nomena famantaranandro izy mba hiala voly amin'ny haretiny. Ny mpahay tantara dia nanoratra fa io famantaranandro io no nahatonga an'i Harrison ho amin'ny famantaranandro fananganana asa.
Fahatsiarovana fahatsiarovana ny fianakaviana sy ny fivarotana famantaranandro
Nasain'i Susan handroso indray aho ara-potoana. Tsapako izao fa olon-dehibe aho ary efa nanambady ary manan-janaka. Nahita zazalahy kely iray sy ny vadiko aho ary nijery teo am-pandihany ary nihazakazaka izy. Tsapako fa vao 20 taona mahery kely aho ary lehilahy miasa miasa. Hoatran'ny hoe "tsotra fotsiny aho."
Nandroso haingana aho. Nahita ny tenako tao amin'ny fivarotana famantaranandro aho tany amin'ny tanàna kely iray. Toa nahatsiaro tena ho 30 taona mahery tany ho any aho na 40 taona tany ho any. Teo amin'ny arabe lehibe ny fivarotana, ary misy trano tsy mihoatra ny 1 ka hatramin'ny 2 ny haavony. Nahita famantaranandro marobe aho tao anaty magazay, nifandona tamin'ny fotoana rehetra koa. Nanana latabatra lehibe iray aho izay manodidina ny tratrany ary misy pensilihazo sy sary hivezivezena manerana an'io ozinina io, miaraka amin'ny amina famantaranandro. Toa sahiran-tsaina aho amin'ny famolavolana sy fanamboarana famantaranandro.
Azafady azafady fa tamin'ny fotoana namangiako azy, dia tsy mitombina amiko ireo fahatsiarovana ny fiainana taloha ireo satria tsy mbola nahaliana ahy tamin'ny famantaranandro aho. Na izany aza, dia nihalehibe, ny raiko tany Chicago dia nanana famantaranandro ho an'ny raibe izay nipetraka tao amin'ny efitrano fisakafoananay. Nandresy ny famantaranandro ho toy ny mari-pivarotana taona maro talohan'izay ary nahazo fampiononana foana aho tamin'ny vanim-potoana izay. Nitazana ny raiko nanamboatra sy nandefa izany aho, nefa natahotra sao hikasika izany satria toa tsy dia marefo amiko foana ilay izy. Ny ray aman-dreniko dia nanana famantaranandro lehibe be dia be koa, izay tiako ny mihaino rehefa mitsidika ny tranony izahay.
Boky mirakitra ny Fiainana taloha sy ny fahaverezan'ny fianakaviana
Tao anatin'ny zavatra niainako nandritra ny famerenam-bokatra tamin'ny naha-famantaranandro ahy dia nahatsapa aho fa nitandrina boky tena manan-danja izay misy fanangonana ireo hevitra noforoniko. Afaka mahita sary sary amin'ny pensilihazo aho na aiza na aiza. Ny fatoran'ity boky ity dia nahasarona tamina faritra mainty sy fotsy, toy ny hoditry ny ombin'ny ombivavy. Tena zava-dehibe ho ahy io boky io ary nihevitra aho fa ahitana pejy an-jatony izy io.
Amin'izay fotoana izay dia nanontaniako i Susan hoe aiza no ifandraisan'ny vadiko sy ny zanako lahy tamin'ny fiainako taloha. Avy hatrany dia nalahelo aho ary nieritreritra fa tsy nifandray tamin'izy ireo, angamba tamin'ny fisaraham-panambadiana. Tsy tao an-tsaiko izay hitady izay nitranga taminy. Nieritreritra aho fa mety nifindra tany andrefan'i Angletera izy ireo na nifindra monina tany Amerika. Tadidiko fa tena kivy be aho satria tsy nifandray tamin'ny zanako lahy ary nanontany tena hoe taiza aho.
Fanamarihana: Ho fantatro taty aoriana fa tamin'ny fiandohan'ny fiainany, John Harrison namoy ny vadiny voalohany i Elizabeth-Scott sy i John zanany lahy.
Zanaka lahikely fiainana faharoa
Nandroso izahay. Tao anatin'izany fahatsiarovana izany taloha dia nahita ny tenako toy ny lehilahy antitra aho izay mipetraka amin'ny tanàna lehibe kokoa, toa an'i London. Tsaroako manokana ny trano fandraisam-bahiny roa misy ilay trano fivarotako. Nipetraka tamin'ny gorodona faharoa teo ambonin'ny fivarotana famantaranandro aho. Nisy efi-trano nisy lakile tao ambanin'ny tohatra izay nitazonako ny famantaranandro tena sarobidy indrindra tamiko. Tsaroako ny fandaharana ny trano sy ny varavarankely.
Tamin'ity fotoana ity dia tadidiko ny fandehanana tany amin'ny paositra tao an-tanàna, satria niahiahy momba ny zanako lahy aho ary nanantena ny hahazo taratasy avy tany aminy. Tadidiko fa William no anarany. Hodinihiko raha efa nifanoratra izy na nisy nandre azy. Na izany na tsy izany, tsy afaka nanatona azy aho ary nanantena foana fa hanoratra ahy izy mba hahafantarako fa tsara izy.
Tadidiko koa fa rehefa mandehandeha eny an-tanàna, dia hanontany ahy foana ny olona "mandritra ny fotoana", araka ny nahafantarana ahy ho mpanamory famantaranandro iray. Nanitsy foana aho ary nitazona fotoana niaraka tamin'ny famantaranandro am-paosy ny karazan-jiro izay tena zava-dehibe tamiko.
Mpiara-miasa amin'ny fiainana taloha
Tadidiko koa fa miara-miasa amin'ny olona eny ambanin'ny arabe izay metallurgist na mpanao panday. Mino aho fa nanampy ahy hahay matihanina io olona io. Tsaroako fa maty aloha izy ary malahelo ahy izy, satria tsapako fa nandray anjara tamin'ny fahombiazako aho. Tsy azoko antoka hoe taiza izy no nipetraka, saingy tsapako fa io olona io dia nipetraka akaiky, tao anatin'ny halaviran'ny toerana misy ny fivarotako.
Fanamarihana: Avy tamin'ny fikarohana nataoko dia nianatra aho fa notohanan'i John Harrison hatrany George Graham, sary an-kavanana. Graham dia mpamita fiambenana sy mpanamboatra zavamaneno, izay mety ilay olona notsiarovako tao amin'ny kaontiko indray nanampy ahy tamin'ny asako. Ampitombohy ny sary ahitanao ireo fitaovana ao ambadika.
Fahitana iray avy amin'ny tontolon'ny fanahy: Zanakalahy taloha iray niatrika fitsapana an-dranomasina ho an'ny Chronometra H3 Harrison
Avy eo dia nangataka ahy i Susan mba handroso mankany amin'ny “faran'ity fiainana ity.” Hitako fa nifoha tamin'ny tapaky ny alina aho noho ny fanaintainan'ny tratrany ary nanana fisedrana mafy. Tsaroako ny nahita talantalana famantaranandro kely tao amin'ny efitranoko tamin'iny alina iny ary nahatsapa aho fa na izany aza dia fantatro fa tapitra ny fotoako. Ny famantaranandro manokana eo amin'ny tokotaniko amin'ny alina dia iray amin'ireo fananako sarobidy indrindra ary tadidiko ny nametraka azy tamin'ny fotoana farany tamin'iny alina iny.
Nasain'i Susan handroso ny fahafatesako aho ary nanontaniany izay hitako taorian'izay. Notsidihiko ny bokin'ny sarin'ireo zavatra noforoniko, izay inoako fa naveriko na dia sitrapoko aza. Toa teo amin'ny taonany ny zanako lahy - mety ho 40 taona angamba izy? Mino aho fa manana ny fianakaviany izy amin'izao fotoana izao. Ny fahitana izay nataoko azy dia namaky ny boky nosoratako tamin'ny alàlan'ny labozia ary nahatsapa ho toy ny any ivelany izany, any Amerika angamba ilay toerana.
Nisy fihetsika hafahafa tao amin'io fahatsiarovana io satria kely ny efitrano novakiny ka natao hazo tanteraka.
Fanamarihana: William Harrison, zanak'i John Harrison faharoa tamin'ny fanambadiany faharoa, dia nitondra ny famantaran'ny John Harrison "H3" ny famantaranandro tao amin'ny sambo nataon'ny Royal British Navy. Rehefa antitra i John Harrison ary saika ho ranomasina, dia nandefa ny zanany lahy i William, hanara-maso ny fitsapana. Mety ho ilay efitrano kely naoriko tamin'ny fahitako an'i William tao anaty sambo anglisy.
Ilay kapitenin-dranomasina anglisy sy mpitady entana malaza James Cook, sary etsy ambony, dia naka ny iray amin'ireo mpandahatra fotoana an'i Harrison tamin'ny diany faharoa sy fahatelo tamin'ny Pasifika niaraka tamin'i William Harrison. Rehefa niverina tany Angletera i Cook tamin'ny 1775, dia nitatitra izy fa ny famaritan'i Harrison dia "mpitari-dalana mahatoky antsika amin'ny alàlan'ny toetr'andro rehetra."
Ilay Andro Nianarako momba an'i John Harrison Sambany
Tadidio fa ny fiainako taloha nifarana teo amin'i Susan dia niseho tamin'ny 26 septambra 2016. 18 volana taty aoriana, tamin'ny 2 aprily 2018, dia nanomboka asa vaovao aho. Tamin'ny andro faharoa tamin'io asa io, dia niasa avy tao amin'ny trano fonenako aho. Nanodidina ny 8:30 maraina teo aho tamin'io andro io, nanokatra ny solosainako aho ary niditra tao amin'ny Internet sy ny pejy Google. Tamin'io andro io, izay ny talata 3 aprily 2018, Google dia manasary sary misy sary mampiseho lehilahy iray antsoina hoe John Harrison, tamin'izy teraka tamin'ny 3 Aprily 1693.
Rehefa avy nanindry teo amin'ilay sary izy, dia tonga tao amin'ny pejy misy ny sarin'i John Harrison. Nisy sary hoso-doko roa - ny iray noforonina aloha teo amin'ny fiainany mainty sy fotsy, ary avy eo ny faharoa izay loko. Ny sary hosodoko faharoa tamiko dia tena manaitra, satria nahita ny tavako manokana teo aminy aho. Nibanjina ahy hatrizay aho.
Tamin'io andro io, naka sary ny tenako aho mba hampitahao ny tarehiko amin'i John Harrison. Ny endri-tarehy dia saika mitovy, na dia amin'ny sarin'i Harrison aza dia 30 taona noho ny taona niainako izy raha nalaiko ny sariko.
Taorian'ny fikarohana ny fahatsiarovana ny fiainana lasa izay azoko tamin'ny fotoam-pivorian'ny 26 septambra 2016, nihaona tamin'i Susan indray aho tokony ho 2 taona taty aoriana tamin'ny Desambra 2018. Nanazava tamin'i Susan aho fa ny fanadihadiana ireo fitadidiko taloha dia nanambara ny fanamarinana ara-tantara mety ho ny fiainako taloha. Nahatsapa aho fa nahita porofo momba ny fiainana lasa izay manan-danja kokoa noho ny zavatra manokana. Nangataka tari-dàlana taminy aho.
Nanoro hevitra i Susan fa hanolo-tanana aho Walter Semkiw, MD ary mety hampanan-kery ny fahatsiarovako ny fiainako taloha tao anatin'ny fivoriana iray medium medium Kevin Ryerson. Fantany ny asan'i Walter ary efa niara-niasa tamin'i Kevin Ryerson nandritra ny taona maro izy ary nanao fampitana fanahy iray antsoina hoe Ahtun Re i Kevin, izay naneho ny fahaizany nanamboatra ny fiainana taloha tamin'ny alàlan'ny fahitsiana azy.
Ny fiarahako mivory miaraka amin'i Kevin Ryerson tamin'ny 16 Oktobra 2019
Ahtun Re, ilay fanahy napetrak'i Kevin, dia nanamarina fa izaho John Harrison tamin'ny andro taloha. Ho fanampin'izay, nanamafy i Ahtun Re fa i William Harrison, zanakalahin'i John Harrison izay nanao fitsapana an-dranomasina tamin'ny anaran'ny rainy, dia i Matthew zanako lahy tamin'ity fiainana ity.
Mahaliana fa namorona tranokala iray i H3mi sy i Matthew zanako lahy. com (tsy mavitrika intsony), izay maneho ny anaran'ilay chonometer John Harrison, ny H3, izay noraisin'i William Harrison tamin'ny fitsapana an-dranomasina niaraka tamin'ny Tafika Britanika.
Ahtun Re dia nanamafy koa fa Kimberly vadiko dia vadin'i John Harrison. Ny zavatra iray hafahafa indrindra tamin'ny andro nahitako voalohany ny vadiko dia fantatro fa tena miavaka izy. Raha ny marina dia nandeha nody aho ary nilaza tamin-dreniko hoe nihaona tamin'ny vehivavy izay hanambady aho. Tsy nampoiziko hoe nahoana no nahatsapa an'izany aho. Tena fitiavana io tamin'ny voalohany!
Mpanoratra ao amin'ny Fiainan'i John Harrison sy Chuck McMurray
Zazalahy tena liana aho, izay manana angovo sy talenta voajanahary amin'ny fisarahana zavatra ary mianatra ny fomba fiasan'izy ireo. Nandany ampahany tsara tamin'ny fanatanjahako tamin'ny fahazazako aho, nanao filma fohy ary nilalao bisikileta sy fiara.
Mpivarotra mpivarotra i Dada, nefa tia mpandrafitra sy nanao zavatra. Nandany fotoana be izy nampianatra ahy ny fomba fampiasana fitaovana amin'ny fahatanorana, ary mampahatsiahy ahy foana fa tokony “hampiasa ny tanako sy ny lohako” aho any aoriana any mba hivelomana. Izay foana no nataoko tamiko.
Nahay namorona foana aho. Nandeha tany an-tsekoly aho mba hifanerasera nefa nifarana tamim-pahombiazana tamin'ny asa ara-teknika nivarotra sy fampiharana ny data sy ny teknolojia. Fantatry ny namako matihanina ho "ilay hevitra ilay izy."
Ny iray amin'ireo asa mahomby indrindra nataoko dia niaraka tamin'ny fanombohana antsoina Alteryx, izay misy fampahalalana data geo-spatial izay efa zatra ankehitriny. John Harrison, miaraka amin'ny famoronana ny tanterahana, dia tafiditra ihany koa amin'ny siansa geo-spatial.
Tamin'ny 11 taona aho dia nanao filokana tamin'ny raiko fa raha hividy fiara modely lavitra ho an'ny ahy izy, izay tsy maintsy atambatra, dia afaka mametraka izany tsy misy fanampiana aho. Raha nandresy io filoham-pirenena io aho dia ny raiko no tompon'antoka amin'ny vidin'ity fitaovana ity. Nentin-draiko ny filokana ary nividy ny kitay fiara izy.
Irery irery, tao ambanin'ny tranoko Chicago, dia nandany 2 herinandro namaky ny torolàlana ary nametraka ny fitaovana sy ny faritra rehetra. Taorian'ny fitsapana vitsivitsy, dia afaka namory ny fiara iray manontolo aho, izay niasa tampoka. Tsaroako ny tavan'ny raiko rehefa tonga tany ivelany izy nahita ahy nitondra azy. Izy dia gaga.
Teo amin'ny faha-13 taonany dia navelan'ny raiko hividy fiara aho, tamin'ity indray mitoraka ity dia fiara tena izy, na dia tsy antitra aza aho nitondra azy. An'i Plymouth Valiant tamin'ny taona 1975 no tsy niasa, ary 300 dolara no nividianako. Nentinay tao an-trano ny fiara mba haveriko.
Gaga i Dada satria tao anatin'ny herinandro vitsivitsy, na dia niasa tamin'ny fitaovana na fitaovana vitsivitsy aza aho dia afaka nanao fiara nijanona sy nihazakazaka. Nataony hoe talenta voajanahary izy, noho izany dia nanohana ahy izy. Tao anatin'ny taona vitsivitsy monja, dia nividy, namerina ary namidy fiara 20 teo ho eo. Nahaliana ahy ny hazakazaka azy ireo, izay toa ahy ihany koa. Azoko tsara ny milina sy ny fomba niasany, tsy nisy fiofanana.
Amin'izany fomba izany, mino aho fa nampianatra ahy toa an'i John Harrison. Tiako foana ny fomba fiasan'ny milina ary faly aho fa afaka manao azy ireo tsara kokoa, toa an'i John Harrison tamin'ny famantaranandro sy ny famoronana ny fandehanana an-dranomasina.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana manaitra ao amin'ny endrik-tarehy an'i John Harrison sy Chuck McMurray. Kitiho ny sary mba hanitarana azy.
Ny filan'ny fiainana taloha, ny talenta ary fahaiza-manao: Naneho talenta sy fahaiza-manaon'ny talenta mekanika i John Harrison sy Chuck.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Nandritra ny fotoana nitondrany an'i Chuck McMurray, dia niara-nihaona tamin'ny vady aman-janany taloha i John Harrison. Notantarain'i Chuck fa tamin'ny fotoana voalohany nihaonany tamin'i Kimberly vadiny, dia fantany avy hatrany fa hivady izy ireo. Izany no fomba havaozina ny fifandraisana taloha amin'ny alàlan'ny reincarnation, amin'ny alàlan'ny lahatra, fahatsapana sy fahatsiarovana ara-pihetseham-po.